July Employer's Promotion ﻿
July Employer's Promotion
Tags: promotion job Myanmar job search jobs in Myanmar hot jobs
In order to celebrate the establishment of the biggest online Job recruiting Alliance in Myanmar, Jobless and its partners would like to make happy some of the companies searching for new talents.
Companies either order CV package of different kind (defined number of CVs and lifetime of the package) or post their jobs and get applications directly to theiremails.
There are more than 4000 registered companies with Jobless.com.mm and any one can win the Lucky draw. The winner will be announced on July 30th and will get anemail.
The main price is 50% OFF everything we sell. If the service price after discount is still more than 350 $, everyone will get iPod Shuffle from Apple Inc
Well, hurry up and register at www.jobless.com.mm or www.rogerquest.com and you can WIN any time. Next Month we choose once again:-)
Jobless.com.mm သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Online အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးသည့် အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် Jobless.com.mm နှင့် partner များမှ လုပ်ငန်းရှင်များ အရည်အချင်းရှိသော ဝန်ထမ်းများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာများရရှိစေရန် ပြုလုပ်ပေးလိုပါသည်။
ကုမ္ပဏီများသည် အမျိူးမျိူးသော CV Package များ ( သတ်မှတ်ထားသော CV အရေအတွက်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်း) သို့မဟုတ် Job Posting ကို မှာယူဝယ်နိုင်ပါသည်။
Jobless.com.mm တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော company ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး မည်သူမဆို ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပြီး ကံထူးသူကို July 30th တွင်email ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကပုံမှန်ဈေးနှုန်းများကို ၅၀% Discount ပေးမည့်အပြင် $ 350 အထက်ဝယ်ယူသူများကို Apple inc ထဲမှ ipodshuffle ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Promotion ကာလမှာ ၃၀ ဇူလိုင်အထိဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အမြန်ဆုံးပဲ www.jobless.com.mm သို့မဟုတ် www.rogerquest.com သို့ သွားရောက်၍ အမြန်ဆုံးပဲမှတ်ပုံတင်ပြီး promotion အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့၏ Jobless အဖွဲ့သားများ